I-Petkit Pura X, ibhokisi yenkunkuma yekati yakho ekrelekrele kwaye icoca ngokwayo | Iindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 13/12/2021 14:00 | Ukuhlaziywa ukuba 15/12/2021 13:00 | ngokubanzi, Reviews
Ukuba unekati, uyazi ukuba ibhokisi yenkunkuma inokuba liphupha lokwenyani, ukuba unesibini okanye ngaphezulu, andizukuxelela nto kwaphela. Nangona kunjalo, sele uyazi ukuba kwi-Actualidad Gadget sihlala sinezona ndlela zingcono ziqhagamshelwe ekhaya ukuze senze ubomi bube lula kuwe kunye nezilwanyana zakho zasekhaya ezizithandayo.
Sijonga i-Petkit Pura X entsha, ibhokisi ye-litter ehlakaniphile ezicocayo kwaye inetoni yezinto ezimangalisayo. Fumana kunye nathi ukuba ungawuvalelisa njani umsebenzi odinayo wokucoca ibhokisi yenkunkuma yekati yakho, niya kuyixabisa nobabini, niya kuzuza empilweni kwaye ewe ekuhambeni kwexesha.
2 Imisebenzi ephambili
3 Izicwangciso kunye neendlela zokunxibelelana nebhokisi yesanti
Sijongene nephakheji enkulu, kunokuba ndingathi inkulu kakhulu. Kude kunento onokucinga ukuba yibhokisi yesanti, imilinganiselo mikhulu kakhulu, sinemveliso enomlinganiselo wama-646x504x532 millimeters, oko kukuthi, malunga nokuphakama njengomatshini wokuhlamba, ngoko asikwazi ukuyibeka ngokuchanekileyo nakweyiphi na ikona.. Nangona kunjalo, uyilo lwayo luyakhapha, lwakhiwe ngeplastiki ye-ABS ngaphandle emhlophe, ngaphandle kwendawo engezantsi, egrey ekhanyayo, apho idiphozithi yesitulo iya kuba khona.
Ivumba lokuphelisa ulwelo
Iphakheji yengxowa yenkunkuma
Phezulu sinesiciko esimile kancinci apho sinokushiya khona izinto, ngaphambili kukho iscreen esincinci se-LED esiza kusibonisa ulwazi, kunye namaqhosha amabini okunxibelelana. Ukongezelela, le phakheji iquka i-mat encinane eya kusivumela ukuba siqokelele imikhondo yesanti enokuthi isuswe yikati, into exatyiswa kakhulu. Ubunzima obupheleleyo bemveliso yi-4,5Kg ngoko ayikhanyi kakhulu. Sinesiphelo esihle kunye noyilo olunomdla, olubonakala lulungile nakweliphi na igumbi, kuba njengoko siza kubona ngezantsi, ukuphunyezwa kwayo kuhle kangangokuba asiyi kuba neengxaki kulo mba.
Ibhokisi le-litter linenkqubo yokucoca esekelwe, ukuba siqwalasela ingaphakathi layo, kwi-drum (apho i-litter yekati iya kuba khona kunye nalapho iya kuzikhulula khona). Inkqubo yokucoca inzima kakhulu, ngoko ke asizukuhlala kwiinkcukacha zobuchwephesha kunye nobunjineli, kodwa kunokuba kwiziphumo zokugqibela esizinikwa yiPetkit Pura X, kwaye kweli candelo sonwabe kakhulu ngovavanyo olwenziweyo.
Akufanele sikhathazeke malunga nento yokuba inokusebenza ngoomatshini, kuba ibhokisi yesanti inenkqubo yokucoca ngokuzenzekelayo ekufuneka siyilungelelanise nesicelo, nangona kunjalo, inezinzwa ezahlukeneyo, zombini ubunzima kunye nentshukumo, eya kuthintela iPura Petkit X ukuba ihambe. ukusebenza nokuba ijekhi isondele kakhulu okanye ingaphakathi. Kweli candelo, ukhuseleko kunye noxolo lwekati yethu encinci luqinisekisiwe ngokupheleleyo.
Jack inlet ububanzi: 22 iisentimitha
Ubunzima besixhobo esifanelekileyo: Phakathi kwe-1,5 kunye ne-8 Kilogram
Ubuninzi bomthamo wesanti: Phakathi kwe-5L kunye ne-7L
Iinkqubo zokunxibelelana: 2,4GHz WiFi kunye neBluetooth
Kufuneka kwakhona kuqatshelwe ukuba iphakheji ibandakanya uchungechunge lwezixhobo, ezi ziinkonkxa ezine ze-liminator yolwelo lwevumba, kunye nephakheji yeengxowa zokuqokelela ukungcola. Nangona isikhongozeli sesitulo sinobungakanani obungaqhelekanga, andicingi ukuba kukho ingxaki enkulu yokusebenzisa naluphi na uhlobo lwebhegi encinci, nangona kunjalo, singakwazi. iingxowa zokuthenga kunye nezinto zokuphelisa ivumba ngokwahlukeneyo ngexabiso umxholo kwiwebhusayithi yePetkit. Ewe kunjalo, ezi zixhobo zikwakhona I-PETKIT igcwalisa kwakhona....
Ngokuphathelele izincedisi, umgangatho jikelele wesixhobo kunye nezinye izinto ezinzima zePetkit Pura X, siye sanelisekile, ngoku kuya kufuneka sinikezele icandelo elipheleleyo kuzo zombini usetyenziso kunye neenkqubo ezahlukeneyo zeprogram kunye nebhokisi yesanti ehlakaniphile izicwangciso.
Izicwangciso kunye neendlela zokunxibelelana nebhokisi yesanti
Ukuyiqwalasela, kuya kufuneka sikhuphele usetyenziso I-Petkit iyafumaneka kuzo zombini Android ukuba kunjalo iOS ngokupheleleyo simahla. Nje ukuba sigqibe uqwalaselo kunye nenkqubo yobhaliso yesicelo, siza kungena ukongeza esi sixhobo sibuzwayo, siya kucelwa ukuba silandele eminye imiyalelo ngamaqhosha ePura X, nangona kunjalo, ukuba unayo nayiphi na imibuzo, thina sicebisa Ungayibona ividiyo esiyilayishile kwisitishi sethu sikaYouTube sihlalutya iPura X apho sikubonisa khona inkqubo yoqwalaselo inyathelo ngenyathelo.
Isicelo sivumela ukuba sigcine irekhodi eneenkcukacha zamaxesha isilwanyana sethu siye kwibhokisi yesanti, kunye neeshedyuli zabo zokucoca, zombini ezizenzekelayo kunye nezandla. Kwaye kukuba sinokuyicima, siqhubele phambili ekucoceni kwangoko kwaye sicwangcise ukususwa kwevumba kwangoko. Kuyo yonke eminye umiselo sinokuqhuba i-"Smart Adjustment" iyafumaneka kwisicelo. Ukongeza, kule rejista siya kukwazi ukujonga ukuhluka kobunzima bekati yethu.
Obu bunzima bentshontsho buza kuboniswa ngoko nangoko kwiscreen se U-X osulungekileyo, oku kusinika ulwazi malunga nemeko yesanti, ukusazisa xa kufuneka siyitshintshe, ngendlela efanayo ukuba zonke izenzo ezibonelelwe sisicelo nazo zinokuqhutywa ngokuthe ngqo ngesandla ngokusebenzisa amaqhosha amabini kuphela emzimbeni ukuba Petkit Pura X iqulathe.
Ngaphandle kwamathandabuzo, oku kubonakala kuyimveliso enomdla kakhulu, unokuyithenga kuyo I-Powerplanet kwi-Intanethi njengomsasazi osemthethweni wemveliso apha eSpain, okanye ngeendlela zokungenisa elizweni ezisuka kwezinye iiwebhusayithi. Ngaphandle kwamathandabuzo, yeyona ndlela ibiza kakhulu, malunga nee-euro ezingama-499 ngokuxhomekeke kwindawo ekhethiweyo yokuthengisa, Kodwa ngakumbi ukuba sinekati engaphezu kweyodwa, kunokusisindisa ixesha elininzi, kusinceda ukuba sigcine ucoceko lwekati kunye nekhaya lethu, ngoko ke lunokuba sisinxulumani esixabiseke gqitha kubomi bethu bemihla ngemihla. . Siye sayihlalutya, sikuxelele malunga namava ethu ngokunzulu kwaye ngoku kukuwe ukuba uthathe isigqibo sokuba ngaba kufanelekile okanye akunjalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Petkit Pura X, ibhokisi yenkunkuma yekati yakho ekrelekrele kwaye izicoca
I-Sonos ibhengeza ukuhambelana neAmazon Music's Ultra HD kunye neDolby atmos